Real Madrid Oo Garaacday Barcelona, Benzema Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo HABAARKII Lionel Messi Oo Sii Socda - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid Oo Garaacday Barcelona, Benzema Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo HABAARKII Lionel Messi Oo Sii Socda
Real Madrid Oo Garaacday Barcelona, Benzema Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo HABAARKII Lionel Messi Oo Sii Socda
April 11, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 6
Real Madrid ayaa guul dahabi ah ka gaadhay Barcelona oo ay ku martigelisay garoonkeeda Alfredo Di Stefano, waxaanay kaga badisay 2-1.
Ciyaar aad u xiiso badnayd oo ay xamaasaddeeduna sarraysay ayay labada kooxood ugu dagaallameen midkii hore u ruqaansan lahaa, isla markaana hoggaanka ku qabsan lahaa Atletico Madrid.
Zinedine Zidane ayaa shax beddel cajiib ah sameeyey ciyaartan isagoo khadka dhexe awoodda saaray, waxaanay taatikadiisu shaqaysay dariiqaddii 13aad oo Fede Valverde oo ahaa laacibka ku cusbaa safka kooxdu uu kubbad kasoo qaatay khadka dhexe, una dhiibay Vazquez oo isaguna usoo gudbiyey Benzema oo cidhib qurux badan ku dhaliyey goolka koowaad ee ciyaarta.
Real Madrid ayaa dardarteedu ka socotay dhinaca bidix ee uu taagnaa Vinicius Junior, waxaana uu laacibkani burburiyey difaacyada Barcelona.
Qalad lagu galay Vinicius Junior daqiiqaddii 28aad meel aan ka fogeyn xerada ganaaxa Barcelona, ayaa waxa qaatay Toni Kroos oo kubbad awood badan ku liishaamay, waxaanay kusii dhacday ciyaartoy Barca ah ka hor intii aanay shabaqa dhaqaanin.
Barcelona ayaa qaybtii dambe si adag u shaqaysay, waxaanay kubbado badan oo lis ahaa keeneen xerada ganaaxa Real Madrid, waxaase is-difaac adag sameeyey Nacho iyo Militao oo aan mar qudha seexanin.
Daqiiqaddii 60aad ayay Barcelona jabisay difaaca Real Madrid, waxaana kubbad uu Jordi Alba ka keenay dhinaca bidix ka booday Griezmann waxaanay u tagtay Oscar Mingueza oo goolkiisii ugu horreeyey ee El Clasico dhaliyey.
Barcelona ayaa ku dooday in ay heshay rikoodhe qaybtii dambe markii uu Braithwaite ku dhacay xerada ganaaxa, waxaase loo sheegay in uu astuuray.
Daqiiqadii ugu dambaysay ayay Barcelona birta u garaacday Real Madrid, waxaase nasiibkooda kubadda oo usoo noqotay ay mar kale ku celiyeen goolka, hase yeeshee waxay dul-martay birta, iyadoo garsooruhuna degdeg u yeedhiyey siidhiga dhamaadka.
Real Madrid ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka LaLiga, waxaanay ka sare martay Atletico Madrid oo berri ciyaaraysa, halka Barcelona ay hal dhibic ka dambayso.
Los Blancos iyo Atletico ayaa min 66 dhibcood haysta, halka Barcelona ay ka leedahay 65 dhibcood.
TAATIIKH: Karim Benzema ayaa toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka goolal u dhaliyey Real Madrid, waxaanu isku qoray taariikhda kooxda, iyadoo uu noqday ciyaartoygii afraad ee Real Madrid ah ee qarniga 21aad toddoba kulan oo isku xiga goolal dhaliya. Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale ayaa ka horreeyey.
CASAAN & Dhaawac: Real Madrid ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey la kulantay war aanay jeclayn, waxaana hal daqiiqo gudaheeda laba kaadh ku qaatay Casemiro oo casaan ku baxay daqiiqaddii 90aad. Waxa kale oo Real Madrid ka dhaawacmay Lucas Vazquez oo difaaca midig ka ciyaarayay tan iyo markii uu dhaawacmay Dani Carvajal.
Mahadsanidiin Ree Laacib.net lkn Sixid Atletico iyo Real ayaa min 66 dhibcoodleh halka Barcelona 65 dhibcood leedahay, waxaana hogaanka si ku meel gaadha u fadhida real oo xaga guusha home iyo away ga kaga haysa Atletico, maaha xaga goolasha balse Atletico ciyaar ayaa baaqi u ah haday badisana hogaanka ayay lawareegi doonaan thanks
Real Madrid ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka LaLiga, waxaanay farqiga goolasha kaga sare martay Atletico Madrid hhhhhhhhh
Real Madrid ayaa si kumeel gaadha hogaanka u la wareegtay sababta oo ah 2 ciyaarood ee ay Atletico la ciyaareen ee home iyo away ga oo ay Atletico ka gacansareeyeen maadaama oo ay marna ka badiyeen marna ay barbaro galeen sida uu dhigayo sharciga Spain 🇪🇸 balse Atletico ciyaar ayaa baaqi u ah haday badisana hogaanka kula wareegi karto bari,
Qoraagan wxan jirin meshan lagamarawo wayo wad lasocota ciyartan si dirqi leh ayad kubax sateen Real sidhas koox.kumaahn isasodis